Ini ndakanyoresa mazana emazita emazita makore apfuura.
Pakati peiyo nguva, ndakatenga dura kubva kunenge chero chikuva chiripo. Zvimwe zviitiko zvaive zvakanaka, zvimwe zvaityisa, uye ruzhinji rwakawa nepakati nepakati.
Kunyangwe iwe uri kutenga domain kwekutanga kana kutsvaga imwe mhinduro kubva kune yako yekupedzisira kunyoresa, iwe unofanirwa kunzwisisa kuti iwe une sarudzo.
Ndekupi kwaunganyorese zita rezita? Sarudzo dzinogona kukamurwa muzvikamu zvitatu:
Ini ndinokuratidza mutsauko pakati pesarudzo idzi uye ndinongedza mapuratifomu epamusoro mukati meboka rimwe nerimwe. Shandisa chinyorwa ichi kudzidza nzira yakanakisisa yokutenga zita renzvimbo.
Sezvinoreva zita iri, dura registrar rinonyanya kushanda ndeyekunyoresa zita remuzinda. Kune mamwe marejista anopa mamwe mabasa zvakare, akadai sekutonga zvirongwa kana vavaki webhusaiti. Asi akanakisa domain registrars shandura semapuratifomu kuti utenge zita rezita.
Ngationgororei ina yepamusoro yepamusoro soro registrar services pamusika nhasi.
Domain.com ndiyo yakanyanya kunaka domain registrar yekutanga-nguva uye vane ruzivo vatengi zvakafanana. Maitiro acho ari nyore, akatwasuka, uye munyoreti anopa basa rakasiyana nemamwe.
Iwe unogona kunyoresa .com domain nekuda chete $ 9.99 pagore neDomain.com.
Munguva yekutarisa maitiro, uyu munyoreti anokupa iwe kukwanisa kutenga domain yako kweanosvika makore mashanu. Ini ndinoda chimiro ichi nekuti hauzofanira kunetseka nezvekuvandudza gore rega.
Paunonyoresa domain, zita rako nekero zvinowanikwa kune veruzhinji. Domain.com inopa kuvanzika uye chengetedzo ye $ 8.99 pagore paguta rega. Kana iwe uri kunyoresa domain pasi pezita rekambani (ndizvo zvandinoita), unogona kuruka izvi. Kana zvisina kudaro, iwe zvechokwadi uchada kuwedzera zvakavanzika uye kuchengetedzwa.
Mamwe marejista domain anopa izvi zvemahara, asi zvakakodzera kubhadhara zvishoma zvakati kuti zvakavanzika zvega.
Domain.com hits pamwe newe mamwe ekuwedzera munzvimbo yese yekutarisa maitiro. Ichi chiitiko chakajairika mune domain registrar indasitiri. Ini ndaigona kusvetuka-inowedzera. Zvinhu zvakaita seSitifiketi seSSL uye SiteLock zvinofanirwa kuuya zvakajairika kubva kune wako webhu mupi wekupa.
Kunyoresa domain kubva Domain.com kunotora isingasviki miniti. Iyo ndiyo yakanyoreswa registrar kune avo vanofunga kuronga kutenga akawanda domain domain.
Domain.com inewo yakasarudzika 24/7 tsigiro yevatengi, ichiita sarudzo yepamusoro yekutumidzira domain uye zvakare.
Namecheap ndeimwe sarudzo yepamusoro yekufunga nezvekunyoresa domain. Anopfuura mamirioni gumi emadhi akanyoreswa kuburikidza nepuratifomu iyi.
Maitiro acho ari nyore kune mumwe munhu asina kumbobvira atenga domain kare.
Namecheap ine .com dunhu inowanikwa ne $ 8.88 pagore. Vanopawo zvemahara kuvanzika uye kudzivirirwa, iri yakanaka bhonasi sezvo chiri chinhu chaungangoda kuve nacho.
Kufanana nevakawanda domain registrars, Namecheap inopa huwandu hwakawanda hwekukwira panguva yekutarisa maitiro. Sezvo iwe uri kuwana kuvanzika uye kuchengetedzwa kwemahara, iwe unogona kuruka zvese zvimwe.
Namecheap ine ruzivo rwakanaka kwazvo hwesimba kana iwe uchida rubatsiro. Kukurukurirana kwehupenyu kunowanikwa 24/7, uye yavo timu yekutsigira inopa tikiti mhinduro nguva pasi peawa maviri.
Nemaitiro akareruka, emahara kuchengetedzwa kwekuvanzika, uye inoshamisa rutsigiro, Namecheap anoendesa zvese zvauri kuda uye zvaunoda mune wedare registrar.
Kana iwe uchitsvaga isina-frills domain registrar, ZitaSilo wakafukidza here? Sezvauri kuona kubva pa skrini iri pamusoro, webhusaiti yavo yakanyanyisa kupera. Asi izvi hazvina kuvamisa kuva mumwe weanonyanya kuzivikanwa domain registrars munyika.
Kutenga .com domain kubva kuZitaSilo kunotanga pamadhora mazana masere nemasere pagore. Iwe unozobatsirwa kubva pamabhuruku kuderedzwa kana iwe uchinyoresa anodarika makumi mashanu emadhora mune rimwe chete.
NameSilo inoita kuti iwe utsvage kusvika kumatunhu mazana mashanu panguva imwe chete. Iwe unogona kunyange kurodha rondedzero yedunhu kubva pakombuta yako kuti uchengetedze nguva.
Kana iyo yechinyakare interface isiri kukunetsa, NameSilo ichava sarudzo yepamusoro kune yako iwe unoda kutenga akawanda masireti panguva imwe chete.
Iko kune kungangoita chero kukwira panguva yekutarisa maitiro. WHOIS kuvanzika uye kuchengetedzwa ndezvemahara, uye mari dzeICANN dzinosanganisirwa muhuwandu. Iwe unogona kuve kunze kwemusuwo kwe $ 8.99 pagore paguta rega.
NameSilo inobvumidza iwe kugonesa auto kuvandudza zvakare, kuitira kuti iwe haufanire kunetseka nezvezita riri kupererwa kana ukakanganwa kuzviita pamurume.
2. Webhu Inotambira Provider
Wese webhusaiti inoda kuitirwa. Saka kana iwe uchinge wanyoresa zita remazita, nhanho inotevera iri kutsvaga webhu inopa mupi. Nezvakataurwa, vamwe vanochengeta varidzi vanokutendera kuti unyore dhesi zvakananga kubva pachikuva chavo.
Kana iwe uri kuronga kunyoresa akawanda masisitimu munguva, shandisa domain registrar. Asi kana iwe uchingoda domain imwe chete, unogona kuchengetedza imwe mari nekubatanidza yako yekutambira uye kunyoresa pamwe chete.
Bluehost ndiyo yakanakisa webhu inopa mubatsiri for domain kunyoresa mabhuru. Ndozvandinokurudzira zvakanyanya.
Asi kana iwe wakagadzirira kushandisa imwe inomiririra mupi, pane mashoma mamwe mapuratifomu ayo anounza hwakanaka maratidziro uye sevhisi yekubata uye domain kunyoresa.
Kunyangwe Bluehost ndewewe webhu inopa webhusaiti, iwe unogona achiri kutenga domain zvakananga kubva kwavari pasina kushandisa kwavo kugamuchira masevhisi. Nekudaro, ini handikurudzire izvi.
A .com domain from Bluehost is $ 11.99 pagore. Kuvanzika uye kuchengetedzwa ndeye $ 11.88 pagore. Pamutengo wakafanana, ini ndinogona kunyoresa nzvimbo mbiri kubva kune dunhu registrar uye ndichine shanduko kune imwe.
Zvisinei, iwe unogona tora zita remahara rezita kubva kuBluehost kana iwe uchiunganidza dura rako rekunyoresa nemasevhisi avo ekutambira.
Maitiro acho ari nyore kwazvo. Ingosarudza yako webhu yekutora chirongwa, uye Bluehost ichakukurudzira iwe kunyoresa domain nyowani. Kana iwe ukatevedza matanho aya, domain yako ichave yakasununguka kwegore rekutanga.
Uchatofanira kubhadhara $ 11.88 pagore nekuda kwekuvanzika uye kuchengetedzwa. Bluehost inopa yakasununguka SSL chitupa, -bhatani-wobva wadzika WordPress kuisa, uye 24/7 kutsigira.
Bluehost ndiyo yakanyanya kunaka webhu inopa wekutengesa pamusika nhasi, uye ndiyo yega webhu yandinosarudzira ini ndinyatso kukurudzira kunyoresa domain.
Dreamhost ndeimwe yepamusoro yekutarisira kwewebhu. Kunyange zvisiri zvakakurumbira senge zvigadzirwa zvavo zvewebhu webhusaiti, Dreamhost inopa domain kunyoresa masevhisi.
Unogona kuwana .com domain neDownhost ye $ 7.99 pagore. Izvi zvinosanganisira kuvanzika kwemahara uye kudzivirirwa. Uyezve, Dreamhost ine anopfuura mazana mana eTLDs, ane .xyz akawedzeredzwa zvakaderera se $ 400 pagore.
Nepo $ 7.99 ye .com domain iri chaizvo basa rakakura, pane kubata. Yako domain ichavandudza pa $ 15.99 pagore.
Ini chaizvo handikwanise kururamisa mutengo uyu, kunyanya kubva papuratifomu inorapa webhu, kwete dura kunyoreswa.
HostGator ndeimwe inozivikanwa webhu webhu inopa anopa. Muchokwadi, ivo vakakwira pane yangu runyorwa rwe yakanakisa makore masevhisi ekubata.
Pamusoro pekubata webhu, HostGator inopa huwandu hwakasiyana hwehumwe masevhisi, kusanganisira anovaka saiti uye kunyoresa domain.
Iwe unogona kunyoresa .com domain ne HostGator ye $ 12.95 pagore. Nepo yakakwira zvishoma kana ichienzaniswa nedare registrars ratinoongorora, ingori yekutanga svumbunuro. Mutengo wacho unosvetuka kusvika $ 17.99 pagore pane patsva.
Kuvanzika uye chengetedzo ndeye imwe yakawedzera $ 14.95 pagore. Saka kunyoresa kwako kwekutanga kunosvika ku $ 27.90 uye kuchavandudza pamadhora mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nemashanu pagore.
Ini ndinogona kuwana madomeni matatu kubva kuDomain.com, Namecheap, neZitaSilo, pamutengo mumwe chete.
Saka iwe unogona kuwana zita rezita kubva kune HostGator? Ehe, sarudzo inowanikwa. Asi ini handisi kuona chero chikonzero nei iwe uchida.
SiteGround ndeimwe yeanonyanya kuzivikanwa uye anozivikanwa webhu webhu revatambi pamusika nhasi. Iyi puratifomu inewo zvakare mazita ekunyoresa domain, kunyange ini ndisingakwanisi kutaura kuti ndinoikurudzira.
Iwe unogona kunyoresa .com domain kubva paSiteGround ye $ 15.95 pagore.
Ndiko kanenge kaviri mutengo wekunyoreswa kwaNamecheap, uye kuchine kubata. Iwe unongokwanisa chete kushandisa SiteGround yekunyoresa domain kana iwe uine SiteGound webhu yekuronga chirongwa.
Saka kana iwe waida kutenga domain kubva paSiteGound uye tambira yako saiti kumwewo, iyo haisi sarudzo.
Kune avo vauri kutarisa kubhadharo domain kunyoresa newebhu webhusaiti, uri nani zvakanyanya kushandisa Bluehost. NeBluehost, iwe uchawana free domain yegore rekutanga, risingawanikwe neSiteGround.
3. Webhusaiti Muvaki
Vanhu vazhinji havabatanidzi vavaki vewebhusaiti pamwe nekunyoresa domain.
Zvakafanana neweweji webhusaiti, ini kazhinji ndaisakurudzira kutenga domain kubva kune chero imwe nzvimbo kunze kweanonyoresa. Asi nezvakadaro, kune vashoma vavaki vesaiti vanopa sosi yekunyoresa masevhisi.
Izvi ndezvimwe zve best website builders kufunga nezve kutenga zita rezita.
Wix inonyanyozivikanwa kune yayo iri nyore dhiza-uye-kudonha muvhi webhusaiti. Kana iwe usiri kuziva maitiro uye kodha iwe uri kugadzira webhusaiti kubva kutanga, Wix isarudzo yepamusoro yekufunga nezvayo.
Iwe haugone chete kutenga domain uchishandisa Wix. Iwe unozoda kubatanidza dura rako rekunyoresa nevakagadzira webhusaiti.
Nezvakataurwa, kune nzira mbiri dzekuwana dhara remahara neiyi chikuva.
Yese nzvimbo yeWix inouya nemahara Wix subdomain. Pasina kushandisa chero chinhu, unogona kuva nesizinda mune inotevera fomati:
Ini handikurudzire izvi kune chero munhu kunze kwekunge uchingoedza neiyo Wix platform. Paunenge iwe wagadzirira kutora zvinhu kune chinhanho chinotevera, iwe uchafanirwa kunyoresa yako pachako domain.
Wix zvakare inopa yemahara domain kwegore rimwe chete nezvose zvakabhadharwa saiti semuvaki zvirongwa. Kuvanzika uye kuchengetedzwa kunosanganisirwa mahara zvakare. Iwe unogona kunyange kubatanidza yako webhusaiti webhusaiti kuburikidza navo, kunyange ini ndisingagone kubvumidza iyo sarudzo.
Squarespace ndeimwe yevandinofarira vavaki ewebhusaiti. Izvo zvakanaka kune vanotanga uye vanhu vane ziso rekugadzira kwakakura.
Asi seWix, kuwana dheti kubva kuW squarespace zvinoreva kuti uchafanira kuisunga pamwe neayo saiti-yekuvaka chirongwa.
Ese squarespace zvirongwa zvegore rega anouya aine yakasununguka tsika domain zita regore rekutanga. WHOIS kuvanzika uye kuchengetedzwa kunosanganisirwa. Dzimwe nzvimbo dzinogona kutengwa pakati pemadhora makumi maviri kusvika pamakumi manomwe emadhora pagore, zvichienderana nekuwedzera.
Idzo mitengo inosemesa kana ukavaenzanisa neyezita registrars ratakatarisisa kare. Kana iwe uchida kutenga zvinopfuura imwe chete domain, iyi haisi iyo sisitimu yekuita kudaro.
Ini ndaizongofunga nezvekunyoresa domain ne squarespace kana iwe uchida domain imwe, uri kushandisa saiti muvaki, uye iwe unofunga zviri nyore kutenga zvese kubva kune mumwe mupi. Ingoziva kuti iwe unogona kumhanyisa mumatambudziko kana iwe uchida kuchinjisa dura rako uye webhusaiti kune imwe chikuva mune ramangwana.
WordPress ndiyo yakakura kwazvo CMS chikuva. Isu tinoshandisa WordPress pano kuChikurumidza Sprout kupa simba webhusaiti yedu.
Ino iyi webhusaiti yakanakira kune avo vanogadzikana nekodhi uye vanoda kuwana zvakanyanya kubva pane yako saiti zvemukati. Kunyangwe WordPress ine plugins iyo inobvumira kudhonza-uye-kudonha kugona kwekugona.
Iwe unogona zvakare kushandisa WordPress kutenga domain. Iyo dhairekitori ichave yakabatana newebhu webhusaiti yako, uye zvitsva zvinogadziriswa kuburikidza neyako WordPress nhoroondo.
Kunyange zvingave zvichiedza kutora domain zvakananga kubva kuWordPress, haisi iyo nzira yakanyanya nyore. Iwe unofanirwa kupfuura ne matanhatu-nhanho maitiro, ayo anosanganisira kugadzira yako WordPress account.
Uyezve, iyo kunyoresa domain inodhura zvishoma. A .com domain kubva kuWordPress inodhura madhora gumi nemasere pagore, iyo inopfuura kaviri mutengo wevanodhura zvikuru domain registrars.
Weebly ndeye webhusaiti inovaka yakananga kune ecommerce nzvimbo. Kufananidzwa kune vamwe vavaki vewebhu webhusaiti kunze uko, kunyoresa zita remazita neWeebly haisi iyo pfungwa yakaipisisa.
Maviri maviri Weebly ekutanga chirongwa chehurongwa (Professional uye Performance) inouya neyasununguka domain kwegore rimwe nechibvumirano chegore. Izvo zvirongwa zvinotanga pamadhora gumi nemaviri nemadhora makumi maviri nemashanu pamwedzi, zvichiteerana.
Iwe unogona kushandisa Weebly kunyoresa domain pasina chirongwa chekuvaka saiti. Icho chikamu chakanaka nezve kushandisa Weebly yekunyoresa domain ndechekuti iwe uchachengetedza mari nekunyoresa kwenguva yakareba yenguva.
1 gore - $ 19.95 pagore
Makore maviri - $ 2 pagore
Makore maviri - $ 5 pagore
Makore maviri - $ 10 pagore
Asi kunyangwe iwe uchigona kuchengetedza kusvika pa37% kubviswa neyekuwedzerwa kunyoreswa, mutengo wemakore gumi uchiri kudhura kupfuura NameCheap, NameSilo, uye Domain.com.
Maitiro ekuti uwane Nzvimbo Yakanaka Yekutenga Domain
Nezvakawanda sarudzo dzaunogona kusarudza kubva, kuwana nzvimbo yepamusoro yekutenga dura kunogona kunetsa. Pane zvimwe zvinhu uye zvinhu izvo zvinofanirwa kutorwa mukufungwa kana iwe uchiongorora chinotarisirwa chikuva kuti utenge dura.
Iyi ndiyo nzira yataishandisa kudzikisa kutsvaga.
Mutengo uye Chibvumirano Terms
Mutengo unofanirwa kugara uri wekutanga chinhu chaunotarisa. Kana ese mapuratifomu aya ari kupa chinhu chimwe chete, zvine musoro kuenda neimwe ine mutengo-inoshanda.
Usangotarisisa zvakawedzera kudhura. Gara uchifananidza mitengo yezvirevo .com, nekuti ndizvo zvaunofanira kunge uchinyoresa.
Tarisa uhure hwebvumirano yako. Vamwe vanopa vanozoda yakaderera nguva yekunyoresa, senge gore rimwe kana maviri. Vamwe vanozopa zvidimbu zvekunyoresa kwenguva refu.
Chengetedza ziso kune imwe mari yekuwedzera. Mazhinji-marongero iwe unozogona kufuratira. Asi iwe zvechokwadi uchazoda kuwana WHOIS kuvanzika uye kuchengetedzwa. Izvi zvinouya zvakasununguka pamwe nekunyoreswa kwako pane mamwe mapuratifomu, asi vamwe vanokwidziridza nazvo.
Ita shuwa kuti chibvumirano chako chinoita kuti zvive nyore kwauri kuti uvandudze yako domain. Tsvaga otomatiki matsva kana zvibvumirano zvichikupa imwe nguva yenyasha mushure mekushomeka kwemuzita, kana ukakanganwa kuvandudza patsva.
Kana iwe usingafarire nedunhu rako registrar, nekuda kwechimwe chikonzero, iwe ungade kuendesa domain yako mune ramangwana.
Iwe haugone kuendesa domain mukati memazuva makumi matanhatu ekutanga ekunyoresa. Nekudaro, iwe wakasununguka kuita zvaunoda nedomhu rako shure kwaizvozvo.
Ingo ita chokwadi chekuti vanyoresa vako vanoita kuti kuendesa kuve nyore kwauri. Mapuratifomu seGoDaddy, ane mukurumbira wekuburitsa kunze zvinobuda. Saka gara uchitarisa kuongorora kwevatengi nezve maitiro ekutamisa usati wagadzikana.
Iwo akanakisa domain registrars anoita ekuchinjisa kuve nyore uye usamhan'arira chero mari yekuwedzera.
Sezvo iwe waona kubva kune ino gasi, iwe unogona kuwana zita rezita kubva kune dzakawanda mapuratifomu. Mamwe emapulatifomu aya anonyanya kuita mamwe mabasa, seweweji webhusaiti kana vavaki vewebhusaiti.
Iko kugona kubatanidza akawanda masevhisi hakufanirwe kukuwisira iwe kune mumwe mupi pamusoro peumwe.
Vazhinji varatidzi vari nani pane imwe sevhisi zvichienzaniswa neimwe. Sezvo iplatifomu iri yeimwe yevakanaka vekuvaka webhusaiti, hazvireve kuti vane chisina kukanganisa domain kunyoresa maitiro.
Muzviitiko zvakawanda, kunyoresa domain kunodhura kubva kuvaki vewebhu uye nevapi vekutapa. Mamwe emapulatifomu aya anokuita kuti utenge dhi rakazvimirira kubva kune avo ekutanga masevhisi, asi vamwe vanokumanikidza kuti uunganidze zvese.
Dzimwe nguva zvakakodzera kuti uende nebheji rebasa. Semuenzaniso, Bluehost inokupa yemahara domain kwegore rimwe chete iwe paunenge uchinyorerana kwewebhu webhu kuronga.
Tsigiro uye ruzivo rweMushandisi
Kunyoresa zita remuzinda hakufanirwe kuve kwakaoma. Kana chikuva chiri kukuita kuti usvetuke kuburikidza ne hoops, pamwe zviri nani kuti utarise kune imwe nzvimbo.
Kazhinji yenguva, iwe unofanirwa kukwanisa kunyoresa domain mukati meminiti kana maviri, zvakanyanya.
Kana iwe uchida kutenga gumi nemazana kana kunyange mazana emadhiza panguva imwe chete, tsvaga mapuratifomu anotsigira izvo zvinodiwa.
Mune zvimwe zviitiko, unogona kuda kukumbira rumwe rubatsiro. Kunyangwe izvi zvisingawanzo kudikanwa kunze kwekunge uchinge uchitamisa domain. Chero zvazvingaitika, iwe uchada kuve neshuwa kuti chikuva chinopa yakanakisa vatengi sevhisi kuti ikubatsire iwe mukutamisa kana chero chimwe chinhu chaunoda kubatsirwa nacho.
Iko kune matatu maitiro makuru ekutenga domain; domain registrars, webhusaiti varidzi, uye vavaki webhusaiti.
Pakati peboka rega rega, iwe unenge uine matani evapeti vakasiyana kusarudza kubva kwavari.
Kutenga domain kubva kune domain registrar kunge Domain.com zvinogara zvichingova yako yakanakira sarudzo. Izvi zvinopa hukuru hwekunyoresa domain, saka iwe unowana yakanyanya mutengo, mhando, uye basa revatengi pano. Uyezve, domain registrars haizokumanikidza iwe kuti uunganidze kunyoresa kwako nerimwe rebasa.
kushandisa Bluehost kubatanidza dura rako rekunyoresa newebhu webhu ndiyo chete nguva yandaifunga nezvekuvhiringidza masevhisi. Iko nekuti Bluehost inokupa mahara domain pasina gore rimwe chete paunosaina urongwa hwekugamuchira.
Vamwe vatengesi vane zvakafanana zvinopihwa, asi zvakazara, ivo vanowira muchikamu chimwe kana chimwe.
Domain Hunter Gatherer Ongorora